गर्भावस्थामा अत्यधिक चिन्ता किन हुनसक्छ खतरनाक? – Health Post Nepal
गर्भावस्थामा अत्यधिक चिन्ता किन हुनसक्छ खतरनाक?
२०७८ फागुन ४ गते १३:३७
काठमाडौं – गर्भावस्थाको समयमा महिलाहरु अक्सर आफ्नो शरीर मा धेरै परिवर्तन देख्छन्। उनीहरूको स्वभाव र मूडलाई पनि असर गरेको हुन्छ। त्यसैगरी महिलाको पेट बढ्दै जाँदा उनीहरुको निद्रा, दिनचर्या, दैनिक काम आदिमा पनि कमी आउँछ, जसका कारण महिलाहरु प्रायः तनाव, चिन्ता वा एन्जाइटीको समस्याको सामना गर्छन्। तनाव र शरीरमा हुने परिवर्तनका कारण एन्जाइटीको समस्या हुनसक्छ। यद्यपि, यसका पछाडि अन्य धेरै कारणहरू हुन सक्छन्।
गर्भावस्थाको समयमा एन्जाइटी हुने प्रमुख कारणहरु
-जब महिलालाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित कुनै जानकारी हुँदैन र यस्तो समयमा उनी गर्भवती हुन्छिन् भने उनलाई एन्जाइटीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी १८ देखि २५ वर्षको उमेरमा गर्भवती भएमा महिलाले ज्ञानको कमीका कारण चिन्ताको सामना गर्न सक्छन्।
-गर्भावस्थामा, महिलाहरूलाई प्रायः धेरै सहयोग चाहिन्छ। जब उनीहरूको पार्टनर अन्य चीजहरूमा व्यस्त हुन्छ वा महिलाहरूले समर्थन पाउन सक्दैनन्, तब पनि तिनीहरू एन्जाइटी वा चिन्ताको समस्याको शिकार हुन सक्छन्।
-यदि महिलाको परिवारमा पहिले कुनै अन्य महिलालाई गर्भावस्थामा एन्जाइटीको समस्या थियो भने त्यसले पनि समस्या ल्याउन सक्छ। यो आंशिक रूपमा हेर्न सकिन्छ।
-कहिलेकाहीँ आर्थिक समस्याको कारण पनि चिन्ता बढ्न सक्छ। जब कुनै नयाँ जिम्मेवारी आउन लागेको छ भने प्रायः आमाबाबुको मनमा आर्थिक स्थितिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि आउँछन्। जसका कारण एन्जाइटीको समस्या आउन सक्छ।
-शरीरमा हुने परिवर्तनका कारण पनि महिलाहरूमा एन्जाइटीको समस्या हुन सक्छ।
गर्भावस्थाको समयमा एन्जाइटीको लक्षण
-जब महिलाहरु एन्जाइटीको समस्याबाट ग्रसित हुन्छन्, उनीहरुको मुटुको धड्कन बढ्छ र उनीहरुमा आत्तिएको जस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
-एन्जाइटीका कारण महिलालाई निद्रामा समस्या हुन्छ। उनीहरु पर्याप्त निदाउन सक्दैनन् र अनिद्राको कारणले पनि तनाव महसुस हुनसक्छ।
-बच्चाको जन्मलाई लिएर महिलाको दिमागमा नकारात्मक सोच आउन थाल्छ। उनीहरुको मनमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिन थाल्छन्, जस्तो कि उनीहरु आफ्नो सन्तानको हेरचाह गर्न सक्षम छन् कि छैनन्, के प्रसवको समयमा बच्चालाई कुनै हानि हुनेछ? आदि।
-कतिपय महिलालाई गर्भावस्थामा एन्जाइटीका कारण सास फेर्न समस्या भएको पनि देखिएको छ।
-अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि महिलाले गर्भावस्थामा प्यानिक अट्याकको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
गर्भावस्थाको समयमा एन्जाइटीबाट छुटकारा पाउने तरिकाहरू
-यदि गर्भावस्थामा महिलाहरूलाई एन्जाइटीको समस्या छ भने त्यसलाई हटाउन ध्यान (मेडिटेशन) महिलाहरूको लागि धेरै उपयोगी हुनसक्छ। ध्यानले मनलाई शान्ति मात्र होइन महिलाको मनलाई नकारात्मक विचारबाट पनि टाढा राख्न मद्दत गर्छ।
-कग्नेटिभ विहेभियर थेरापीमार्फत महिलाहरूले गर्भावस्थाको समयमा चिन्ताको समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छन्। यस थेरापीमा त्यस्ता लक्षण कम गर्ने उपाय पाइनुका साथै समाधान पनि निस्किन्छ। यो थेरापी धेरै सेसनमा गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूले परिस्थिति अनुसार थेरापी रोज्छन्।
-महिलाहरूमा एन्जाइटीको समयमा निद्रामा समस्या देखिन्छ। साथै, निद्राको समस्याका कारण पनि महिलाहरूमा एन्जाइटी हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा निद्राले महिला र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले गर्भावस्थामा महिलाहरुले पर्याप्त सुत्न आवश्यक छ।
-कहिलेकाहीँ शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमीका कारण पनि एन्जाइटी हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा महिलाले गर्भावस्थामा अत्यावश्यक पौष्टिक तत्वको सेवन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा शरीरमा ऊर्जा मात्रै नभई बच्चाको स्वास्थ्य पनि ठीक रहिरहोस्।
-गर्भावस्थाको समयमा बच्चासँग सम्बन्धित र आमाको शरीरमा हुने परिवर्तनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले चिन्ताको समस्यालाई पनि कम गर्न सक्छ।
-यदि तपाईंको पार्टनर कुनै अन्य काममा व्यस्त छ भने हरेक प्रकारका सहयोगका लागि पारिवारका अन्यको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ।
-गर्भावस्थामा महिलालाई प्रशस्त आराम चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा महिलाको शरीरमा अत्याधिक कामका कारण चिन्ताको स्तर पनि बढ्न सक्छ।
-आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा शारीरिक गतिविधिहरू थप्नु पनि एक राम्रो विकल्प साबित हुनसक्छ।
-यदि गर्भावस्थामा एन्जाइटीको समस्या बढ्दै गएको छ भने यस्तो अवस्थामा डाक्टर वा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ।